निवर्तमान (Nibartaman) ||: अबको वैकल्पिक कार्यदिशा
लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरु जन्मिनु स्वभाविक हो । अनि लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको लागि सबैभन्दा ठूलो पर्व चुनाव नै हो । चुनावमा श्रेष्ठता हासिल गर्नका लागि दलहरुले अनेक कसरत गर्दछन् । यद्यपि त्यस्ता क्रियाकलापले कस्तो राजनीतिक संस्कार निर्माण गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न चाहिं महत्वपूर्ण हुन जान्छ । चुनावमा दलहरुबीच हुने ‘प्रि–इलेक्सन एलायन्स’ चुनावी विजयी हासिल गर्ने जमर्को हो । यो तत्कालीन र वस्तुगत आवश्यकता हो । तर, पार्टी एकताको कुरा भने अलि बढी दीर्घकालीन हुन्छ ।
त्यहाँ विचार, दर्शन, सिद्धान्त अनि गन्तब्यको मिलन हुनु जरुरी हुन्छ । अहिले चुनावी गठबन्धन निर्माण गरी चुनावी अभियानमा लागेका दुई ठूला पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माकेबीचको गठनबन्धनमा भने दुवै विषय सँगसँगै घालमेल भएकोले यसको भविष्य के हुन्छ भनेर चुनावी नतिजा र त्यसपछिको मुभलाई नै कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।
तथापि जुनसुकै राजनीतिक पार्टीको जन्म निश्चित सैद्धान्तिक आधारमा हुन्छ र त्यसले निश्चित राजनीतिक कार्यदिशाको आधारमा कार्यसम्पादन गर्दछ । नयाँ शक्ति पार्टीको निर्माणसँगै नयाँ शक्ति कस्तो पार्टी हो ? यसको सैद्धान्तिक दर्शन के हो ? यसको राजनीतिक कार्यदिशा के हो ? अनि मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रुपान्तरणका सन्दर्भमा यो पार्टीका तात्कालीक एजेण्डाहरु केके हुन् ? आम रुपमा यी यावत् विषयहरुमा केही न केही जिज्ञासा पक्कै पनि छ ।
अबको राजनीति समाजको विद्यमान अवस्था र त्यसको ऐतिहासिकता अनि भविष्यको आवश्यकतामा आधारित भएर अघि बढ्नुपर्छ, नकि पुरातन आग्रह र पूर्वाग्रहमा आधारित भएर । हिजो जसरी विश्वलाई आधारभूत रुपमा पूँजीपति वर्ग र श्रमिक वर्गको रुपमा परिभाषित गरिएको थियो र तिनै वर्गलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी राजनीतिक दर्शनको निर्माण गरियो, त्यो दर्शनले मूलतः दुईवटा वर्गहरुको रक्षा गर्यो – पूँजीपति वर्ग र सर्वहारा श्रमिक वर्ग । तर, आजको विश्वलाई हेर्दा अब विश्व केवल यी दुई आधारभूत वर्गमा मात्रै सीमित देखिएन । २१ औं शताब्दीको ज्ञान, विज्ञान, सूचना र प्रविधिको युगमा विश्व पनि बहुध्रुवीय र बहुवर्गीय बन्दै गएको छ । अनि ती फरक प्रवर्गहरुबीचको सन्तुलन र गतिले नै अस्तित्व प्रदान गर्दछ । यसरी हेर्दा ती फरक प्रवर्गहरुबीचको गतिशील सन्तुलन नै वैकल्पिक राजनीतिक दर्शन हो ।
अब चर्चा गरौं वैकल्पिक राजनीतिक कार्यदिशाको । वैकल्पिक राजनीतिको कार्यदिशा हरेक समाजको आफ्नै आवश्यकता अनुसार फरकफरक हुन सक्छ । युरोपेली समाजमा अभ्यासमा रहेको वैकल्पिक राजनीतिको कार्यदिशा र नेपाली समाजको आजको कार्यदिशाबीच समरुपता नहुनसक्छ । जस्तो कि युरोपेली देशहरुमा वातावरण र प्रकृति यसको मुख्य एजेण्डा हो भने हाम्रो समाजमा आज पनि यो वैकल्पिक राजनीतिको एजेण्डा त हो तर प्रमुख कार्यदिशा बन्दैन । किनकि हाम्रो आर्थिक, सामाजिक अनि राजनीतिक अवस्था त्यो अवस्थासम्म पुगेको छैन । अझै पनि यो तरल छ, यसर्थ यसको व्यस्थापन नै अहिलेको मुख्य कार्यभार हो ।
जुनसुकै समाजमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अन्तरविरोधहरु हुन्छन् र ती अन्तरविरोधहरुको वस्तुगत पहिचान र समाधानका लागि राजनीतिक दलहरु स्थापना भएका हुन्छन् । जहाँसम्म नयाँ शक्तिको कार्यदिशाको कुरा छ, त्यो मूलतः ५ ‘स’ मा आधारित छ । जुन यस प्रकार रहेको छ ।
यसरी छिमेकीसँगको सन्तुलित सम्बन्धसँगै मुलुकको बृहत्तर आर्थिक हितका लागि सबैभन्दा पहिले मुलुकको आन्तरिक राष्ट्रियता मजबुद् बनाउनुपर्छ । अनि आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो पार्नका लागि सतहमा उठेको पहिचानको मुद्दालाई सहभागितामूलक र समावेशी लोकतन्त्रको माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने र माथि उल्लेख गरिएका तीन जातीय क्लस्टरबीच राष्ट्रिय एकता कायम गरेर आन्तरिक एकता मबजुद बनाउनुपर्छ । अब पनि त्यही अन्तरमुखी र निरिह प्रकारको मानसिकतालाई बोकेर हामी वैश्विक अर्थराजनीतिक रंगमञ्चमा उभिन सक्दैनौं । यसकारण आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो बनाउँदै दुई ढुंगाबीचको तरुल मानसिकतालाई तोडेर दुई ठूला अर्थतन्त्रबीचको गततिशील पुल बनेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुपर्छ । यसर्थ, यसको समाधान स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन नै हो ।
पाँचौं अर्थात् अन्तिम अन्तरविरोध भनेको यहाँका राजनीतिक दलहरुले ग्रहण गरिरहेका वैचारिक एवं सैद्धान्तिक जडता र बदलिएको वस्तुगत परिस्थिति र राजनीतिक चेतनाको अन्तरविरोध हो । अहिले हाम्रो समाजमा जेजस्ता वैचारिक एवं राजनीतिक दर्शन र दृष्टिकोणहरु विद्यमान छन् ती कुनै न कुनै रुपमा पारम्परिक जडतामा आधारित छन् । किनकि हाम्रो राजनीतिको सुरुवात नै समाजको वस्तुगत आवश्यकतामा होइन किन्तु कुनै अमूक दर्शन या सिद्धान्तमा आधारित भयो । हो, हामीले अहिलेसम्म दर्शनमा राजनीति गर्यौं । तर, समाजलाई र जनताको जीवनस्तरलाई बदल्ने प्रकारको दर्शनको खोजी गरेनौं बरु प्रकारान्तरले त्यस्तो खोजीको चेष्टालाई दुत्कारिरह्यौं । अनि हामीले समाजको अवस्था, परिवर्तनको गति र नियम, समाजको वस्तुगत आवश्यकता बुझ्न सकेनौं ।
मान्छेका चाहना र आवश्यकता अगाडि तर, हाम्रो चिन्तन प्रणाली निकै पछाडि पर्न गयो । अब त्यही दर्शन र वादलाई व्यवहारतः लागू गर्ने बेला आएको छ । यस मानेमा नयाँ शक्तिले लिएको सन्तुलित हुँदै अगाडि बढ्ने र समुन्नत समाजवादको दिशातर्फ उन्मुख हुने रणनीतिक कार्यदिशा साँच्चिकै वैकिल्पक विचार हो । विगतका रुढ अनि शास्त्रको रुपमा परिभाषित भएका विचार र दृष्टिकोणलाई नै बोकेर हिंड्नुको साटो बदलिएको वस्तुगत यथार्थ र वर्तमान अपेक्षाकाबीच तालमेल मिलाउँदै अग्रगामी फड्को हान्ने राजनीतिक दर्शन अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता पनि हो । अनि पारम्परिक होइन आर्थिक समृद्धिसहितको समुन्नत समाजवादसम्म पुग्ने रणनीतिक कार्यदिशा पनि आजको वैकल्पिक कार्यदिशा नै हो ।
नयाँ शक्तिले प्रतिबद्धता जनाएका यी कार्यदिशा लागू गर्न, जनताका आवाजलाई मुखरित गर्ने सामाजिक अभियानहरु संचालन गर्ने र समृद्धिमुखी राजनीति गरी आम नागरिकको अवस्था फेर्ने नै यसको मुख्य राजनीतिक लाइन हो । अनि हरेक व्यक्ति र यसका अभियन्ताहरु आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक निजी र पारिवारिक जीवनमा पनि खुल्ला र पारदर्शी बनेर अघि बढ्ने नै यसको वैकल्पिक संस्कृति हो ।